VaNeville Mehluli Mchina Voshandura Nzira dzeKuchengetedzwa kweChikafu
Muchina wakagadzirwa naVaMchina unobatanidza varimi vanenge vaine zvirimwa zvakawandisa zvinogona kuguma zvaraswa pamwe nevatengi.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri kuHague kuNetherlands, VaNeville Mkhululi Mehluli Mchina, vakagadzira muchina unobatanidza varimi vanenge vaine zvirimwa zvakawandisa zvinogona kuzoguma zvaraswa pamwe nevatengi kana vemisika.
VaMchina, kuburikidza nekambani yavo yeInvisible Food, vakaparura muchina uyu, uyo unoshandisa njere yepadandemutande kana kuti Artificial Intelligence, kuziva kunenge kuine murimi anenge aine zvirimwa zvakawandisa zvekuti anogona kutozorasa zvimwe kana zvisina kupera kutengwa.
Kana muchina uyu waziva kune murimi uyu, unozomubatanidza nemisika pamwe nezvitoro zvinenge zvichida zvirimwa zvake, angava mabhanana kana mimwe michero yakaita semango nemaranjisi, kusanganisira.
Izvi zvinonzi naVaMchina zvinozobatsira zvikuru kudzivirira kuraswa kwemichero nemiriwo izvi sezvo zvichizopedzisira zvagadziriswa zvimwe dyiwa kana zvinwiwa kugutsa nyika.
VaMchina vanoti pari zvino kambani yavo iri kushanda iri kwakare kuNetherlands nekuGermany, asi vanoti vari mubishi kuunganidza mari inoita miriyoni imwe chete yema Euro (1 million euros), yekuti vakwanise kuumba michina inoita kuti vazokwanisa kushandawo munyika dzichiri kusimukira dzakaita seZimbabwe.
Hurukuro naVaNeville Mkhululi Mehluli Mchina